अष्ट्रेलियामा कोसँग मस्ती गर्दैछन् झरना र साम्राज्ञी ? « Ramailo छ
अष्ट्रेलियामा कोसँग मस्ती गर्दैछन् झरना र साम्राज्ञी ?
प्रकाशित मिति : Dec 1, 2017
‘ए मेरो हजुर २’ को शो सकिएपछि निर्देशक झरना थापा र नायिका साम्राज्ञी राज्य लक्ष्मी शाह अष्ट्रेलियामा रमाई रहेका छन् । समुन्द्री किनारमा मस्ती गरेको कुल तस्बिर झरना र साम्राज्ञीले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेका छन् । समुन्द्रमा त्यहाँ रहेका नायक स्वतन्त्र प्रताप शाह पनि छन् । स्वतन्त्रले झरनाले बनाएको फिल्म फेसबुकमा अभिनय गरेका थिए । झरना र साम्राज्ञीका केही रमाईला तस्बिरहरु हेर्नुस् :